प्रदर्शनकारीले हङकङको विमानस्थल कब्जा गरेपछि...
मापसे गर्ने चालकलाई जरिवाना होइन अब हिरासतको सजाय
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन : मतदान १० बजेदेखि सुरु हुँदै
सभामुखको आसन र विधिको शासन !
के पाकिस्तानको भ्रमण गर्दैछन् राष्ट्रपति ट्रम्प ?
जाडोका कारण मङ्गोलियामा २६ हजार जनावर मरे
प्रदर्शनकारीले हङकङको विमानस्थल कब्जा गरेपछि…
घटना र विचार, न्युज डेस्क ii5months ago August 12, 2019
हङकङका प्रदर्शनकारीले विमानस्थल ‘कब्जा’ गरेका छन् । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीको भिडले विमानस्थलको टर्मिनल भवन भरिभराउ भएपछि हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानहरूको उडान र अवतरण ठप्प भएको छ ।
विमानस्थलको आगमन कक्षमा हजारौँ प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेपछि हङकङ विमानस्थलको सम्पूर्ण उडान र अवतरण रोकिएको बताइएको छ । विमानस्थल कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारका लागि सम्पूर्ण उडान तथा अवतरण बन्द गरिएको जनाएको छ ।
प्रदर्शनकारी विमानस्थलभित्र पसेपछि विमानस्थलको कारबाही प्रभावित भएकाले सोमबारका उडान तथा अवतरण बन्द गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एसियाको व्यस्त विमानस्थलमध्ये पर्ने हङकङ विमानस्थल सोमबार बन्द हुँदा कैयौँ देशका हजारौँ यात्रु प्रभावित बनेका छन् ।
पेट्रोलियम अन्वेषणअन्तर्गत दैलेखमा ‘साइस्किम सर्भे’ शुरु
बिहि, माघ ९, २०७६
मदिरा सेवन गरी साथीको हत्या गर्ने दुई किशोर पक्राउ
चिनी उद्योगले तिर्नुपर्ने एक अर्ब २० करोड, कृषकले पाए जम्मा १५ करोड